El Salvador: Hooyo da' yar oo xoriyadeeda dib u heshay ka dib markii lagu waayay in ay canugeeda dishay - BBC News Somali
El Salvador: Hooyo da' yar oo xoriyadeeda dib u heshay ka dib markii lagu waayay in ay canugeeda dishay
Gabadh 21 jir ah oo reer El Salvador ah oo canugeeda oo mayd ah laga helay musqul ay ku dhashay ayaa lagu waayay in ay dil gaysatay ka dib markii maxkamadaynteeda lagu celiyay.
Evelyn Hernández ayaa markaste sheegi jirtay in aysan wax dambi ah galin, iyadoo sheegtay in aysan war u hayn in ay uur lahayd, ayna miyir daboolantay markii ay dhalaysay.
Dacwad oogeyaasha ayaa rabay in lagu xukumo 40 sano oo xabsi ah.
Dacwaddeeda ayaa si dhaw loogala socday gudaha dalka El Salvador iyo dibadaba, iyada oo qolyaha xuquuqda dumurka u dooda ay dalbanayeen in gabadha la sii daayo dacwadeedana meesha laga saaro.
Goolkii horseeday dagaalka labo dal dhexmaray
Maxay saddexdan dumarka ah ilmahooda iskaga soo xaaqeen?
Dawladda El Salvador ayaa leh mid ka mid ah shuruucda ugu adag dunida ee ka dhanka ah caruur iska soo xaaqidda, carruur iska soo xaaqidda ayaa mamnuuc ka ah xaalkay doontaba haku timaaddee, dumarka lagu helo dambigaasna waxay wajahaan labo illaa sideed sano oo xabsi ah.
Balse dacwado badan oo ay ka mid yihiin kan loo haystay Hernández ayaa loo badalay dil halis ah, arrintaas oo horseedi karta 30 sano oo xabsi ah.
"Illaahay ayaa mahad leh, caddaalad ayaa la helay," ayay tiri markii ay maxkamadda bannaankeeda cagaha saartay iyadoo xor ah ka dib 33 bilood oo ay xabsi adag ay ku jirtay. "Mustaqbalkaygu waa in aan tacliinta sii wato horayna u socdo anigoo hadafkayga hiigsanaya. Waan faraxsanahay" ayay tiri sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
"Farxad ayaan la qarxi rabaa," ayay tiri Bertha Maria Deleon oo ah qareenkii difaacaysay, waxayna arrintaas ku qortay Twittekeeda.
Si kastaba ha ahaatee waxay sheegtay in dagaalku uusan wali dhammaan, dacwadda Hernández ayaa ahaa midkii koobaad ee noociisa ah ee El Salvador ay amarto in si buuxda dib loogu dhagaysto.
Dadka u dooda xuquuqda dumarka ayaa rajaynaya in dib u dhagaysiga dacwadan uu gogolxaar u noqon doono dib u dhagaysiga dacwadaha dumarka xabsiyada ku jira ee ku eedaysan dambiyada ku saabsan carruur iska soo xaaqidda oo dalka El Salvado uu meel adag ka taagan yahay, si ay racfaan uga qaataan xukunka lagu riday.
"Waan awoodnaa waana sii wadi doonnaa dagaalka, sababtoo ah waxaa wali jira dumar la eedeeyay oo si degdeg ah ugu baahan in ay caddaalad helaan," ayay Twitterka ku soo qortay Deleon.
Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa xukunka maxkamadda ku tilmaantay "guul muhiim ah oo u soo hoyatay xuquuqda dumarka El Salvador" waxayna dawladda ugu baaqday in ay soo afjarto, arrinta wajigabaxa ah ee dumarka dambiile yaasha looga dhigayo.
Xafiiska xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa isaguna horay ugu baaqay in El Salvador ay wax ka badasho shuruucdeeda la xiriira carruur iska soo xaaqidda.